मनोरंजन Archives - Filmy Hotline
सारेगमप’मा तहल्का मच्चाइरहेका पृतम र आयुश फाइनल प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं २६ भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टीभीको संगीत रियालिटी शो ‘सारेगम प लिटल च्याम्स २०१९’को फाइनलमा दुई नेपाली बालक पुगेको विषयले नेपालमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। फाइनलमा पुगेका इटहरीका प्रितम आचार्य र भक्तपुरका आयुष केसीको स्वर जादूले नेपाली दर्शकको मन छोएको छ। बलिउडका चर्चित गायक एवं कलाकारहरुले समेत उनीहरुको गायिकीलाई उच्च प्रशंसा गरिरहँदा दुवैजना फाइनलसम्म पुगेका हुन्। शोको ग्रान्ड फिनाले १०० सिम्फोनी आर्केस्ट्रासहित आज आइतबार राति ९ बजे हुँदैछ। डिजिटल राउन्ड, अडिशन मेगा अडिसन, फेमिफाइनल पार गर्दै फाइनलमा पुगेका प्रीतम र आयुसका अन्य ४ प्रतिस्पर्धी छन्। अहिलेसम्म दुवैले दर्शक र निर्णायकबाट भरपुर प्रेम पाएका छन्। गीतको भावमा डुबेर गाउन सक्ने एवं स्टेज खुलेर गाउने प्रीतम सेमिफाइनलबाट पहिलो नम्बरमा छानिएर फाइनल पुगेका हुन्। सेमिफाइनलमा आचार्यले ‘तडप तडप’ र आयुषले ‘तुम मिले दिल
नेपालका दुई सान बाल गाएक पृतम आचार्य र आयुश केसिले धुम मच्चाएका छन। हिजोको बेजोड प्रश्तुती पछि दुबै गाएक पृतम र आयुश सारेगमपको फाईनलमा पुग्न सफल भएका छन। यश हप्ताको कार्यक्रम बाट नौ जनामा3जना बाहिरिएका हुन भने6जना फाइनलमा उत्रिएका छ हिजोको प्रश्तुतिमा पृतमले लुट गय हम लुट गय बोलको गित गाएर सबै जजहरुलाई रुवाएका थिए। उनको स्वर देखेर अथिती जजले यस्तो प्रश्तुती अहिले सम्म नदेखेको र यो मेरो लागि मेमोरी हुने बताएका थिए । त्यस्तै पृतमको त्यो फिलिङ सहितको गायकी देखेर सबै जुरि आफ्नो ठाँउ बाट उठेर पृतमलाई बोकेका थिए। जब सबैको गायकी सकियो जजले6जना छान्न पर्ने भयो । तब शुरुमै पृतमको नाम जजको मुखमा आएको थियो। त्यस्तै अर्का बाल गाएक आयुश केसिले तु मिले बोलको गित गाएर सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाएका थिए। उनको गायकी हेरिसके पछि अथिती जजले प्ले ब्याक सिङिङ मा राम्रो भविष्य छ भनेका थिए। त्यस्तै आयुशलाई
छोटो समयमा सर्वाधिक चर्चा कमाउन सफल भयो गायक प्रकाश सपुत र गायिका शान्तीश्री परियारको स्वरमा रहेको गीत ‘गलबन्दी’ले । उक्त गीत अहिले नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा रहेको छ । युट्युबमा सार्वजनिक भएको ८ दिनमै उक्त गीत ५५ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यसै बिचमा ‘गलबन्दी’ कि गायिका शान्तीश्रीले शनिवार बेलायतको फार्नबरो तताएकी थिइन् । बेलायतको फार्नबरोको खुला मैदानमा भएको नेपाली ओपन कन्सर्टमा २५ सय भन्दा बढी दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो। बाक्लो उपस्थिती रहेको दर्शक माझ गायिका शान्तीश्री सहित नेपाली गायक गायिकाहरूले आ-आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए ।
यस्ता छन्- भद्रगोलकी रक्षाको श्रीमान । सानैमा बिहे भएको खुलाशा । पहिलो पटक मिडियामा आए (भिडियो हेर्नुस) रक्षाले खोपेकी छिन्, हातमा श्रीमानको नामको यस्तो ट्याटु । सबैले शेयर गरौं ।
काठमाडौं-नेपालकै नँ १ कमेडी सिरियल भद्रगोलकी चर्चित पात्र हुन्, रक्षा श्रेष्ठ । वास्तविक नामबाटै उक्त सिरियलमा अभिनय गर्दै आएकी रक्षाले भद्रगोलमा पाएको लोकप्रियताले कलाकारितामा अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिन पाएकी छिन् । उनी निरन्तर म्युजिक भिडियोमा काम गर्दैछिन् भने बिभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा पनि उनको व्यस्तता छ । पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेको पिडालु बोलको लोक दोहोरी गीत चर्चाको शिखरमा छ । भद्रगोल हेर्ने र रक्षालाई चिन्ने धेरैलाई अझै थाहा नहुन सक्छ कि, रक्षा श्रेष्ठ बिवाहित कलाकार हुन् । जिग्रीसँगको सिरियलमा केमेष्ट्री र रिल लभका कारण पनि धेरैले रक्षा अबिवाहित नै होलिन् भन्न्े बुझेका छन् तर त्यसो होईन्, रक्षा बिवाहित हुन् । उनको श्रीमानको नाम मिग्मा भएको बुझिन्छ कारण रक्षाले आफ्नो हातमा श्रीमानको नामको ट्याटु पनि हानेकी छिन् । भिडियो हेर्नुस
बोल माया गीत गाएर चर्चामा आएकी नेपाली लोक दोहोरीकी होनहार गायिका शान्ती श्री परियार लामो समय पछि मिडियामा आएकी छिन।अहिले गलबन्दी गीत बजारमा आएको एकै दिनमा १० लाख भन्दा बढीले हेरे पछि उनि मिडियामा आएकी हुन्। जव सबैलाई रूहाएकी शान्ति श्री परियारले यो पटक पनि रूहाउने होकी भन्ने प्रश्न धेरैलाई जागेको थियो तर गीत सोचेको भन्दा फरक आएपछि सबै अलमलिए।प्रकाशले जव फरक कन्सेप्ट प्रयोग गरि उल्टो बोल माया भन्दा अगाडिको कथालाई गीतमा उनेको र बोलमाया दुई आउने समेत मिति शान्ति श्रीले मिडियामा पहिलोपटक खोलेकी छिन।भिडियो कुराकानी अन्तिम सम्म हेरिदिनुहोला :
नरेश र श्यामलाई सम्मान । कुवेर, शारदा र बिनोदलाई पुरस्कृत गरिने
चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको मिति २०७६ जेठ १ गते बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले ‘चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार – २०७५’ को घोषणा गरेको छ । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका सदस्य तथा इमेज एफएम र हिमालय टेलिभिजनमा कार्यरत नरेश भट्टराई र संघका सदस्य तथा भिजन संसार डटकमका सम्पादक श्याम स्मृतलाई चलचित्र पत्रकारिता राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । चलचित्र पत्रकारितामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै संघले भट्टराई र स्मृतलाई सम्मान गर्न लागेको हो । संघले संघका पूर्व कार्यसमिती सदस्य तथा रातोपाटी डटकममा कार्यरत कुवेर गिरी र संघकी पूर्व कार्यसमिती सदस्य तथा एबिसी टेलिभिजनमा कार्यरत शारदा थापालाई चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । चलचित्र पत्रकारितामा देखिएको सक्रियता र योगदानको कदर गर्दै गिरी र थापालाई पुरस्कृत गर्न लागिएको हो । पुरस्कार स्वरुप नगद २१ हजार रुप
‘यात्रा’ ले तीन दिनमा कमायो १ करोड ७५ लाख ग्रस || लगानी उठाउन कमाउनु पर्नेछ ९ करोडमाथि || के होला त फिल्म हिट ?
शुक्रवारबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको युवा स्टार सलिनमान बनिया अभिनीत फिल्म ‘यात्रा’ ले प्रदर्शनको तीन दिनमा घरेलु बक्सअफिसमा राम्रो पैसा छाप्न सफल भएको छ । एकसाथ प्रदर्शनमा आएको अभिनेता अनमोल केसी अभिनीत फिल्म 'ए मेरो हजुर ३' ले व्यापारमा ठूलो असर गरेता पनि फिल्मले तीन दिनमा डेढ करोडमाथि व्यापार गरेको निर्माता तथा वितरक शुशील पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । प्रदर्शनको पहिलो दिन शुक्रबार राजधानीमा २५ लाख र मोफसल २० लाख व्यापार गरेको फिल्मले दोस्रो दिन शनिबार राजधानीमा ३० लाख र मोफसलमा २५ कमाउन सफल भएको छ । यस्तै, तेस्रो दिन आइतबार यस फिल्मले राजधानीमा ४० लाख छाप्दा मोफसलमा ५ लाख कम कमायो । अर्थात् ३५ लाखको विजनेश गरेको निर्माता पोखरेलको भनाई छ । फिल्मको तीन दिने कमाई जोड्दा १ करोड ७५ लाख ग्रस हुन आउँछ । यो तीन करोडको आसपासमा निर्माण भएको फिल्म हो । यसले घरेलु बजारबाट लगानी उठाउन मात्र ९ करोडमाथ
रमितसँग फिल्म गर्न नमानेकी सुपुष्पालाई अनमोलको जोडी बन्ने इच्छा || अनमोलको तारिफ गरेर थाक्दिनन्, सुपुष्पा
एक समय नेपाली फिल्ममा आफ्नो बोलबाल रहँदा अभिनेता रमित ढुंगानासँग काम गर्न अभिनेत्रीहरु मरिहत्ते गर्थे । तर, गएको केही वर्षमा समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अहिलेका अभिनेत्रीहरु उनीसँग होइन चकलेटी ब्वाई अनमोल केसी वा प्रदीप खड्कासँग स्क्रिन साझेदार गर्न लालयित हुने गर्दछन् । हालै ‘रणवीर’ फेम्ड अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टले रमितसँग रोमान्स गर्न अस्वीकार गर्नुले पनि यो कुरालाई थप छर्लङ्ग पार्छ । गएको महिना अभिनेता रमितले १८ लाख पारिश्रमिक बुझेर ‘राजा साहेब’ नामक फिल्म साइन गरेका थिए । अहिले यो फिल्मका लागि निर्माण टिम लिड अभिनेत्रीको खोजीमा छ । अभिनेत्री खोजीकै क्रममा निर्माण टिमले सुपुष्पालाई रमितको अपोजिटका लागि अप्रोच गरेको थियो । तर, उनले रिजेक्ट गरिन् । फिल्मको सुटिङको बेला आफ्नो परिक्षा पर्ने भएकाले गर्न नसकेको उनले फिल्मीखबरसँग बताएकी छन् । उमेरमा ठूलो अन्तर भएका कारण जोडी नसुहाउने भएकाले उन
तेस्रो पटक सँगै काम गर्दै पूजा र आकाश || फिल्मको नाम ‘पोई पर्‍यो काले’ || के पूजाले सुदर्शनको साथ छाडेकी हुन् ?
सिल्भर स्क्रिनमा निकै रुचाइएको अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको जोडी तेस्रो पटक पनि एकसाथ पर्दामा देखिने निश्चित भएको छ । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म 'रामकहानी' मा पहिलो पटक रोमान्स गरेका यी दुईको दोस्रो फिल्म 'सम्हालिन्छ कहिले मन' मा पनि जोडी बाँधिएको छ । हालै यो फिल्मको यूके सेड्युल पूरा गरेर निर्माण टिम राजधानी फिरेको छ । करीब २ महिना लामो यूके बसाईपछि राजधानी फर्किएको केही दिनमा नै पूजा र आकाशले तेस्रो पटक पनि साथमा काम गर्ने निर्णय लिएका छन् । 'तिमीसँग' फेम्ड निर्देशक शिशिर राणाले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ‘पोई पर्यो काले’ मा दुई अनुबन्ध भएका छन् । नयाँ वर्ष २०७६ को दिन आइतबार निर्माण टिम र अभिनेता-अभिनेत्रीबीच औपचारिक रुपमा कागजी सम्झौता भएको हो । दुबैले कथावस्तु मनपरेका कारण फिल्म गर्न राजी भएको बताएका छन् । फिल्मका प्रस्तुतकर्ता श्यामबहादुर थापा हुन् । रघु परियार र
६० प्रतिशत मुनाफा लिने सर्तमा ‘झ्यानाकुटी’ निर्देशकसँग दीपकराजको टिमअप
यस वर्ष दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको टिमले दुई बाहिरी ब्यानरसँग सहकार्य गरेर दुई फिल्म निर्माण गर्दैछ । पहिलो, निर्माता रोहित अधिकारीको एकल लगानी रहने फिल्म 'छ माया छपक्कै' मा उनीहरुको सहकार्य कन्फर्म भइसकेको छ । लगानी रोहितको सोलो हुने तर, फिल्मको मुनाफाको ५० प्रतिशत भने दीपकराजको टिमले लैजाने सर्त छ । फिल्मलाई 'घामपानी' र 'गोपी' फेम्ड निर्देशक दीपेन्द्र लामाले निर्देशनको कमाण्ड सम्हाल्दैछन् । बैशाख अन्तिमबाट यो फिल्मको छायांकन सुरु हुँदैछ । यसको कथा, पटकथा र संवाद अहिले दीपकराजले लेखिरहेका छन् । फिल्ममा उनीसँगै केदार घिमिरे र जितु नेपाल लिड रोलमा रहनेछन् । रोहित अधिकारी फिल्मस् र आमा सरस्वती फिल्मस्को संयूक्त ब्यानरमा यो फिल्म बन्नेछ । दशैंमा फिल्म प्रदर्शनमा आउने निश्चित भइसकेको छ । योसँगै दीपक-दीपाको टिमले अर्को बाहिरी ब्यानरसँग गर्न लागेको दोस्रो फिल्मको पनि टुंगो लागेको छ । उनी